Sunday March 08, 2015 - 18:59:37 in Sliding Images by Super Admin
Sanad guurada 2aad
Munasabad ay ka qeyb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybaha kale duwan ee bulashada iyo boqolaal ka tirsan ardayda dhigata iskuulada ay gacanta ku hayso Hey’ada Horumarinta Tacliinta iyo gar gaarka bini’aadanimo ee SOHEDA, laguna xusayey sanad guuradii 2-aad ee ka soo wareegtay markii la aas-aasay hay’adda ayaa lagu qabtay hotel SYL ee magaalada Muqdisho.
Hay ‘adda horumarinta Tacliinta iyo Gargaarka Bini’aadanimo ee uu lahaa fikirka hirgalinta hey’adaasi Xildhibaan Yuusuf Xeyle Jimcaale oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay gacanta ku heysaa 39 iskuul oo ay dhigtaan 860 arday.
Munaasabadda ayaa intii ay socotay waxa lagu soo bandhigay filim Decumentry ah oo ka hadlayay waxyaabihii ay qabatay hey’ada labadii sano ee la soo dhaafay.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan iyo C/kariim Xuseen Guuleed wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka ahna la Taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha Dalka oo goobta ka hadlay ayaa muujiyay sida muhiim ay u tahay wax barida ubadka Soomaaliyeed ee danta yarta ah iyagoo ammaanay waxqabadka hey’adda SOHEDA.
C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in aysan wax caadi aheyn in intan oo arday ah in Jamciyadan ay gacanta ku haayo, waxaana uu ku amaanay Xildhibaan Yuusuf Xeyle, sida uu isugu xilqaamay in ardaydan uu dusha u rito waxbarashadooda.
Xildhibaan Bashiir Caddow oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya kuna hadlayay magaca Xildhibaannadii ka qeyb galay Munaasabadda ayaa ku booriyay umadda Soomaaliyeed in ay ku daydaan Xildhibaan Yuusuf Xeyle.
Wasiirka beeraha Soomaaliya mudane Axmed Xasan Gaboobe Ugaas Bile oo isna hadal kooban ka jeediyey halkaasi ayaa tilmamay in ardayda Soomaaliyeed ee danyarta ah in wax la baro ay tahay arrin ahmiyad weyn leh.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Odawaa oo ugu dambeyntii ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in uu bixin doono waxbarashada 100 arday oo lagu biirinayo kuwii horey u dhiganayay Iskuulada ay gacanta ku heyso hay’adda, islamarkaana Dowladda Soomaaliya ay ka go’antahay tageerida wax kasta oo lagu horumarinayo Tacliinta ubadka Soomaaliyeed.
Hey’adda SOHEDA ayaa gacanta ku heysa caruur badan oo aan helin waxbarasho iyo daryeel, iyadoo mar walba ka fikirta caruurta danta yar ee aan qoysaskooda awoodin inay iska bixiyaan lacagaha iskuulka iyo waxbarida ubadkooda.